Robert Lewandowski oo ku guuleystay abaalmarinta ciyaayahanka ugu fiican Bundesliga… – Hagaag.com
Robert Lewandowski oo ku guuleystay abaalmarinta ciyaayahanka ugu fiican Bundesliga…
Posted on 27 Juunyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Xiriirka Kubadda Cagta Jarmalka ayaa Jimcihii shaaciyey in xiddiga reer Poland Robert Lewandowski uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican Bundesliga xilli ciyaareedka haatan ee 2019-2020.
Tani waxay timid ka dib markii weeraryahanka Bayern Munich uu dhaliyay xilli ciyaareedkan 33 gool isla markaana uu noqday laacibka ugu sarreeya liiska gooldhalinta horyaalka, isagoo dhigay rikoor ah ciyaaryahanka ajnabiga ah ee ugu goolasha badan hal xilli ciyaareed, wuxuuna heystaa kulamo haray oo ku kordhin karo goolashiisa.
Isaga oo ka hoos shaqeynaya macalinka kooxda ee Jarmalka Hans Flick, Lewandowski wuxuu gacan ka geystey sidii looga gudbi lahaa bilowgii adkaa ee Bayern iyo inay ku guuleysto kooxda Bavaria koobkii 8aad oo isku xiga, ka dib tartan adag oo ay kala kulmeen kooxda uu xifaaltanka taariikhiga ah kala dhaxeeyo ee Borussia Dortmund.
Lewandowski ayaa ka sarre maray ciyaartoydii sida weyn kor ugu qaaday heerka kooxahooda, sida weeraryahanka Leipzig Timo Werner, kuwa Borussia Dortmund Jadon Sancho iyo Erling Haland.
Lewandowski wuxuu ku biiray Bayern xagaagii 2014 isagoo kaga yimid Dortmund, heshiis xor ahaa, wuxuuna ka qeybgalay 283 kulan, wuxuu dhaliyay 239 gool, wuxuuna abuuray 53 fursad.